धरानको बीपीमा मस्तिष्कमा मासु पलाएको, पानी जमेको र कोरोना पोजेटिभ ५ वर्षीय बालकको जटिल शल्यक्रिया::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरानको बीपीमा मस्तिष्कमा मासु पलाएको, पानी जमेको र कोरोना पोजेटिभ ५ वर्षीय बालकको जटिल शल्यक्रिया
धरानः धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा एक कोरोना संक्रमित नाबालकको जटिल शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
भारतको बिहार राज्यका एक ५ वर्षीय बालकको बुधबार राति साढे चार घण्टा लगाएर जटिल शल्यक्रिया गरिएको हो । ती बालकको मस्तिष्कमा मासु पलाएको तथा पानी समेत जम्मा भएको अवस्थामा प्रतिष्ठान भर्ना भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. चुरामणी पोखरेलले जानकारी दिए ।
विगत ४ दिनदेखि असह्यरुपमा टाउको दुखेर रोइकराइरहेको अवस्थामा २ दिनदेखि ज्वरो पनि देखापरेको थियो । ती बालकलाई शुरुमा उपचारका लागि विराटनगरको एक अस्पतालमा ल्याइएको थियो । कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि त्यहाँबाट धरान रेफर गरिएको थियो ।
हातखुट्टा नचल्ने तथा आँखा नखोल्ने जस्तो अचेत अवस्थामा बालरोग विभागको आकस्मिक कक्षमा ल्याइएको ती बालकको रिपोर्टहरु हेर्दा कोराना संक्रमण भएको देखिनुका साथै एमआर आई रिपोर्टमा मस्तिष्कमा मासु पलाएको तथा पानी जम्मा भएको देखिएको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठानका न्यूरो सर्जन डा. आलोक दाहालको नेतृत्वमा ती बालकको आकस्मिक शल्यक्रिया गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
बिरामी बालकको दायाँबायाँ नै मासु पलाएको र पानी समेत जम्मान थियो । खप्परको हाडमा प्वाँल पारी उनको अप्रेसन गरिएको चिकित्सकले जानकारी दिएका दिएका छन् । अप्रेसनमा डा. दाहालसहित सर्जरी विभागका डा. निमेष विष्ट, डा. सुशिल तथा एनेस्थेसिया विभागका सिनियर कन्सल्टेन्ट डा.आशिष सुवेदी, जेआर डा.प्रशान्त, स्टाफ नर्स कविता, टेक्निसियन चन्द्र, हेल्पर पूजालगायत संलग्न थिए । उनीहरुलाई कोभिड अस्पतालका फोकल पर्सन डा.विकास साह, पेडियाट्रिक विभागका डा.जितेन्द्र ठाकुर, डा.स्नेहा किरणले पनि साथ दिएका थिए ।
अचेत अवस्थामा भर्ना भएका बालकको स्वास्थ्य स्थिति सुधारोन्मुख रहेको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । ‘बालकले अहिले आँखा खोल्ने, हातखुट्टा चलाउनेजस्ता काम गर्न थालेका छन्’, उनले भने, ‘अहिले बायोस्पी, कल्चर गर्न दिइएको छ । त्यसको रिपोर्ट हेरेर रेडियोथेरापी कि अरु नै उपचार थाल्नछौं ।’
हात्ती भगाउन राखेको बिजुलीको नाङ्गो तारमा करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु